မမတွေရင်ထဲနေရာယူထားမိတဲ့ကောင်လေးမျိုးဆိုတာ – Trend.com.mm
ခုနောက်ပိုင်း မမနဲ့မောင်ဇာတ်လမ်းလေးတွေများသပါ့နော်။ မမတွေဟာ သူတို့ထက်အသက်ငယ်တဲ့ကောင်လေးတွေကိုဘာလို့ချစ်မိခဲ့တာလည်း၊ဘယ်လိုပုံစံကောင်လေးတွေကို သူတို့ရွေးချယ်ပြီးသဘောကျမိတတ်ကြတာလည်းဆိုတာသိစေဖို့ မမတွေသဘောကျမိတဲ့ကောင်လေးတွေရဲ့အချက်အနည်းငယ်ကဘာလည်းဆိုတာ…
မိန်းကလေးတွေဟာအသက်ငယ်ငယ်ကြီးကြီးသူတို့ကို ချစ်တာထက်တန်ဖိုးထားတာကိုမသိစိတ်ကပိုမက်မောတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့အပေါ်ကိုနေရာတကာမှာတန်ဖိုးထားဦးစားပေး နေရာပေးတတ်တဲ့ကောင်လေးမျိုးကို စိတ်ထဲအကြိုက်တွေ့နေတတ်ပါတယ်။ သူတို့မှာ စွမ်းဆောင်
ဘယ်လောက်ပဲ အသက်ငယ်တယ်ပြောပြော မိန်းကလေးဆိုတာမျိုးဟာ ကိုယ့်ကိုဂရုတစိုက်နဲ့စိတ်ပူပေးတတ်တဲ့ကောင်လေးမျိုးကိုသဘောကျတတ်ကြတာပါ။ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသားကကိုယ့်ကိုစိုးရိမ်စိတ်ပူပြတာသိပ်မဆန်းပင်မဲ့အသက်ငယ်တဲ့ကောင်လေးတွေရဲ့လူကြီးတစ်ယောက်လိုစိတ်ပူပြမှုကတော့ မမတွေအတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိတတ်လွန်းပါတယ်။
အသက်ငယ်ပင်မဲ့တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်မားပြီးသဘောထားကြီးတတ်တဲ့ကောင်လေးတွေကိုကြွေတတ်ကြပါတယ်။တော်တော်များများအသက်ငယ်တဲ့ကောင်လေးတွေဟာ မိုက်ရူးရဲဆန်တတ်ကြပါတယ်။ဒီလိုလူတွေထဲကမှ သဘောထားပြည့်ပြည့်၀၀နဲ့စိတ်ဓာတ်
သေချာတာတော့မမဆိုသူတွေဟာ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အသက်ရွယ်အပိုင်းခြားတစ်ခုကိုရောက်နေတတ်ကြပါပြီ။ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားသလိုသူတို့နဲ့လက်တွဲမဲ့သူကိုလည်းထိုနည်းတူဖြစ်စေချင်မှာပါ။ လူငယ်ဆိုပြီး အချိန်တိုင်းလွတ်လပ်ပျော်ပါးနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ သူ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူ၊ သူ့ပန်းတိုင်နဲ့သူ ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းသွားနေတဲ့ ကောင်လေးမျိုးကို လေးစားသဘောကျမိတတ်ကြပါတယ်။
သူများပြောတိုင်းသူများနည်းတူနောက်ယောက်လိုက်တတ်တဲ့သူမျိုးမဟုတ်ပဲ ကိုယ်ပိုင်ဆန်းသစ်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ကောင်လေးမျိုးကိုသဘောကျတတ်ကြပါတယ်။ ဆန်းသစ်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေ ဆန်းဆန်းပြားပြားလေးသူတို့ကိုချည်းကပ်တာမျိုးကို
ဆိုတော့ ကိုယ်သာမမ ဆိုရင် ဘယ်လိုအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကောင်လေးမျိုးကို ကြွေမိတတ်ကြသလဲ…. ကိုယ်သာကောင်လေးဆိုရင်ကော ကိုယ်တိုင်မမတွေ အကြွေခံရတဲ့ ကောင်လေးမျိုးလားဆိုတာ…
ခုနောကျပိုငျး မမနဲ့မောငျဇာတျလမျးလေးတှမြေားသပါ့နျော။ မမတှဟော သူတို့ထကျအသကျငယျတဲ့ကောငျလေးတှကေိုဘာလို့ခဈြမိခဲ့တာလညျး၊ဘယျလိုပုံစံကောငျလေးတှကေို သူတို့ရှေးခယျြပွီးသဘောကမြိတတျကွတာလညျးဆိုတာသိစဖေို့ မမတှသေဘောကမြိတဲ့ကောငျလေးတှရေဲ့အခကျြအနညျးငယျကဘာလညျးဆိုတာ…
မိနျးကလေးတှဟောအသကျငယျငယျကွီးကွီးသူတို့ကို ခဈြတာထကျတနျဖိုးထားတာကိုမသိစိတျကပိုမကျမောတတျကွပါတယျ။ သူတို့အပျေါကိုနရောတကာမှာတနျဖိုးထားဦးစားပေး နရောပေးတတျတဲ့ကောငျလေးမြိုးကို စိတျထဲအကွိုကျတှနေ့တေတျပါတယျ။ သူတို့မှာ စှမျးဆောငျ
ဘယျလောကျပဲ အသကျငယျတယျပွောပွော မိနျးကလေးဆိုတာမြိုးဟာ ကိုယျ့ကိုဂရုတစိုကျနဲ့စိတျပူပေးတတျတဲ့ကောငျလေးမြိုးကိုသဘောကတြတျကွတာပါ။ကိုယျ့ထကျအသကျကွီးတဲ့အမြိုးသားကကိုယျ့ကိုစိုးရိမျစိတျပူပွတာသိပျမဆနျးပငျမဲ့အသကျငယျတဲ့ကောငျလေးတှရေဲ့လူကွီးတဈယောကျလိုစိတျပူပွမှုကတော့ မမတှအေတှကျဆှဲဆောငျမှုရှိတတျလှနျးပါတယျ။
အသကျငယျပငျမဲ့တှေးချေါနိုငျစှမျးနဲ့စိတျဓာတျပိုငျးဆိုငျရာမွငျ့မားပွီးသဘောထားကွီးတတျတဲ့ကောငျလေးတှကေိုကွှတေတျကွပါတယျ။တျောတျောမြားမြားအသကျငယျတဲ့ကောငျလေးတှဟော မိုကျရူးရဲဆနျတတျကွပါတယျ။ဒီလိုလူတှထေဲကမှ သဘောထားပွညျ့ပွညျ့ဝဝနဲ့စိတျဓာတျ
သခြောတာတော့မမဆိုသူတှဟော ရညျရှယျခကျြတှနေဲ့ပွညျ့နှကျနတေဲ့အသကျရှယျအပိုငျးခွားတဈခုကိုရောကျနတေတျကွပါပွီ။ဆိုတော့သူတို့ကိုယျတိုငျလညျးရညျရှယျခကျြကွီးမားသလိုသူတို့နဲ့လကျတှဲမဲ့သူကိုလညျးထိုနညျးတူဖွဈစခေငျြမှာပါ။ လူငယျဆိုပွီး အခြိနျတိုငျးလှတျလပျပြျောပါးနတောမြိုးမဟုတျပဲ သူ့ရညျရှယျခကျြနဲ့သူ၊ သူ့ပနျးတိုငျနဲ့သူ ဖွောငျ့ဖွောငျ့တနျးတနျးသှားနတေဲ့ ကောငျလေးမြိုးကို လေးစားသဘောကမြိတတျကွပါတယျ။
သူမြားပွောတိုငျးသူမြားနညျးတူနောကျယောကျလိုကျတတျတဲ့သူမြိုးမဟုတျပဲ ကိုယျပိုငျဆနျးသဈတဲ့အတှေးအချေါတှနေဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့လုပျကိုငျဆောငျရှကျတတျတဲ့ကောငျလေးမြိုးကိုသဘောကတြတျကွပါတယျ။ ဆနျးသဈတဲ့အတှေးအချေါတှေ ဆနျးဆနျးပွားပွားလေးသူတို့ကိုခညျြးကပျတာမြိုးကို
ဆိုတော့ ကိုယျသာမမ ဆိုရငျ ဘယျလိုအခကျြတှနေဲ့ပွညျ့စုံတဲ့ကောငျလေးမြိုးကို ကွှမေိတတျကွသလဲ…. ကိုယျသာကောငျလေးဆိုရငျကော ကိုယျတိုငျမမတှေ အကွှခေံရတဲ့ ကောငျလေးမြိုးလားဆိုတာ…